Permalink Reply by nyyh on June 9, 2011 at 10:30
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် .ဆက်လက်စောင့်မျှော်ဖတ်ရှု့နေပါ့မယ် .... ။
Permalink Reply by 1tvu59ccj2avt on June 10, 2011 at 13:17
မသိတာတွေ သိရလို့ 
ကျေးဇူး ကျေးဇူး ကျေးဇူးပါ။
Permalink Reply by thethtetyuya on June 10, 2011 at 21:37
အကို..........အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်၊အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေရတဲ့အတွက်ပါ၊ နောက်ကိုလည်းစာတွေရေးပါဦးနော်၊ ခင်မင်စွာဖြင့်
Permalink Reply by Aung on June 11, 2011 at 17:32
ရေးသူကိုေ၇ာ.. web ကိုရောပါ ပူးတွဲပြီး ရှယ်လိုက်ပါဦးမယ်.. ခွင့်ပြုပါ..
Permalink Reply by Wathone Oo on June 13, 2011 at 11:31
ကိုဇာနည်! ဒီလို site မျိုးရှိနေတာကို အခုမှသိရတာပါ။
အရမ်းဗဟုသုတ ရပါတယ်။ အပိုင်း(၁)ကိုတော့ မမှီလိုက်ပါဘူး ဘယ်လိုပြန်ရှာရမလဲဆိုတာ ကူညီပေးပါဦး။
ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်မှန်ဖို့ဆိုရင် ရော ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ?
phonetics သင်တန်းတွေတက်ဖို့လိုလား ဘယ်မှာတက်တာကောင်းမလဲ အကြံပေးပါနော်။
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on June 13, 2011 at 15:12
အပိုင်း(၁) ကိုဒီမှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အသံထွက်မှန်ဖို့ကတော့ အသံထွက်ပါတဲ့ dictionary ရှာပြီး computer မှာ install လုပ်သုံးနီုင်ပါတယ်။ Cambridge Advance Learners Dictionary of Current English ဆိုရင် အမေရိကန်အသံထွက်ကော ဗြိတိန်ကအသံထွက်ပါ နှစ်မျိုးစလုံးထည့်ပေးထားပါတယ်။ Phonetics သင်တန်းလို့ ရန်ကုန်မှာကြေညာနေတဲ့သင်တန်းတွေဟာ အမှန်တော့ Phonectic ကိုသင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ အသံထွက်သင်္ကေတဖတ်နည်း Phonetic scripts ကိုဖတ်တဲ့နည်းကိုသာ သင်ပေးကြတာပါ။
Permalink Reply by Queen on June 15, 2011 at 16:55
Permalink Reply by khaing khaing soe on June 15, 2011 at 17:50
*“This is my last time for today.” ကနေ “This is my lust time for today.” ဖြစ်သွား ရောခင်ဗျာ။ *
Remarkable words for me indeed, thanksalot for highlighting it...
Permalink Reply by May May Win on June 15, 2011 at 18:26
Thanks for sharing, Saya Zar Ni!
Permalink Reply by Shwezinthiri on June 15, 2011 at 20:28
Permalink Reply by 1z32bac4b8r2j on June 16, 2011 at 13:21
Permalink Reply by myo oo on June 16, 2011 at 17:37
ဒီလိုလေးတွေ ဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ